Febroary 18, 2022 Janoary 11, 2022 by Làlana Shweta
Misy Simulator Applications taonina ho an'ny karazana fiara isan-karazany toy ny fiara fitateram-bahoaka, kamio, fiarandalamby sns. Fa ny ankamaroan'ny olona dia te-hilalao lalao Bus Simulator amin'ny Android toy ny "Bus Simulator Ultimate Apk" ??.
Momba ny Bus Simulator Ultimate
Izy io dia fampiharana fampiharana novoariko tamin'ity lahatsoratra ity izay ahafahanao misintona ny tsipika Apk farany dikan-ny Apk ho an'ny findainao. Avy eo apetaho amin'ny fitaovanao izy io ary ankafizo amin'ny fotoana fialan-tsasatrao na aiza na aiza.
Ankoatry ny App dia efa nizara famerenana feno momba azy aho izay hanomezana anao feo fa mahomby sy inona izany. Noho izany, manoro hevitra anao aho hamaky mamaky mialoha alohan'ny hanaovana izany amin'ny telefaona anao.
izany Lalao RPG dia atolotry ny Zuuks Games ho anao izay navoaka tamin'ny 15 Jona 2019 ka tena vaovao eny an-tsena. Nahatratra 50 arivo ny fampidinana azy tao anatin'ny iray andro ka azonao sary an-tsaina ny fitiavan'ny olona ireo lalao ireo ary na dia mitombo haingana aza ny mpankafy azy.
Na izany aza, milanja 155 megabytes izy io, izay somary lehibe ary maka toerana be dia be eo amin'ny fitaovanao.
Fa matoky ahy aho rehefa mikasika ny grapiny, mifehy sy vokatry ny feo mendrika izany. Satria manolotra sary an-tsary avo lenta avo indrindra ho anao izy io, izay manome endrika tena misy ny filanao.
Fanampin'izay, manana fividianana an-tsokosoko izay mamela ireo mpampiasa azy hanavao ny endri-javatra amin'ny vidiny. Ankoatr'izay, ireo fividianana in-app dia ampiasaina ahazoana loharanom-pahalalana ao amin'ny App toy ny Bus-grady, ny fitaovana, ny bus vaovao sy ny sisa.
anarana Bus Simulator Ultimate
Developer Lalao Zuuks
Anaran'ny fonosana com.zuuks.bus.simulator.ultimate
Android takiana 5.0 ary ny
Lalana tena misy
Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia manome sary an-tsary 3D tena misy ianao ary ireo làlana izay handeha hitondra ny aotinao dia tena misy. Satria izy ireo no lalana simika sy virtoaly izay misy eo amin'izao tontolo izao ka raha mitondra fiara ianao hahatsapa ny tena tontolo iainana.
Ankoatr'izay dia afaka mitory ny lozam-pifamoivoizana be ianao ary dia ho lasa fizahan-tany hamakivaky ny fifamoivoizana mahery vaika izany.
Misy lisitry ny sarintany lehibe izay mamela anao hilalao amin'ny karazan-toerana isan-karazany fa tsy mitondra fiara amin'ny lalana iray na sarintany iray ihany. Manana sarintany amin'i Tiorkia, Holanda, Frantsa, Espaina, Italia, ary firenena hafa.
Toy ny làlany ihany koa, misy ihany koa ny sarintany ary izy ireo no sarin'ireo sarintany firenena nolazaina teo aloha.
Fomba fiasa lehibe amin'ny Bus Simulator Ultimate Apk
Misy karazany maro ny endri-javatra mahavariana ao amin'ny App izay hitorianao irery rehefa mametraka sy milalao azy amin'ny telefaona ianao.
Noho izany, manoro hevitra anao mafy aho mba hilalao azy farafaharatsiny indray mandeha ary manome toky anao aho fa ho tia azy ianao. Na izany aza, raha tianao ny hizara ny endri-javatra ho anao ho anao avy eo ireto dia misy lafin-javatra manaraka ireto.
Misy fihenan-tsofina Coach telo ambin'ny folo izay afaka hivezivezena amin'ny tianao ianao.
Mahazo mpandeha izay tsy maintsy alehanao mankany amin'ny alehany ianao ary manome fanamarihana ihany koa izy ireo.
Manolotra anao tena régime sy interface tsara ianao ary lasa be mpampiasa ihany koa.
Ho afaka hankafy an'io maimaim-poana ianao ary tsy misy fiampangana misintona azy.
Azonao atao ny mihaino radio amin'ny alàlan'ny 250 Radio amin'ny alàlan'ny telefaonao raha mitondra fiara.
Izany dia ahafahanao mankafy ny valim-peo mahaliana toy ny tandroka, brake ary sns.
Azonao atao koa ny mankafy ny toetrandro mandifotra sy mahafaly ary avy ny orana.
Manana rafitra fifamoivoizana tena izy.
Bokotra fanaraha-maso maromaro izay ahafahanao misafidy ilay mety aminao.
Izy io dia manohana fiteny maro hatramin'ny 25 ka hatramin'ny anglisy.
Mety ho liana amin'ny fanandramana ity lalao Bus Simulation ho an'ny Android ity ihany koa ianao
Raha very hevitra ianao ary tsy mahalala ny hanombohana azy dia avelao aho hanazava izany amin'ny teny tsotra eto.
1. Voalohany indrindra, sintomy ny rakitra Apk ary apetraho.
2. Avy eo alefaso.
3. Safidio ny maody lalao tianao satria misy maody maro azo atao.
4. Misafidiana sarintany na zotra.
5. Avy eo manomboka mivezivezy amin'ny làlana mahavariana.
Famerenana fohy momba ny fampiharana izany ka raha nankafizinao izany dia ampahafantaro anay amin'ny alàlan'ny hevitrao. Raha manana fangatahana fanampiny momba ny App ianao dia afaka mizara ireo eto amin'ny faritra fanehoan-kevitra.
Izao dia azonao atao ny misintona ny kinova farany Bus Simulator Ultimate Apk ho an'ny Androids amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra Download.
Zarao amin'ny namanao: Alohan'ny handehanana ny App dia tiako ho anao ry zalahy fa raha tianao dia ataovy azafady zarao amin'ny namanao sy mpiara-miasa aminao ity lahatsoratra ity.
Sokajy Games, simulation Tags Bus Simulator Ultimate, Bus simulator Ultimate Apk, Lalao RPG Post Fikarohana
MangaKu.Pro Apk Download ho an'ny Android [Manga maimaim-poana]